Ukutshintsha ii-imeyile kunye nezinto ezisuswe ngempazamo. Ungasusi ii-imeyile kwibhokisi yemeyile yokutshintshiselana.
Ikhaya iimveliso DataNumen Exchange Recovery Cima izinto zoTshintshiselwano ngempazamo
Cima izinto zoTshintshiselwano ngempazamo? DataNumen Exchange Recovery Ungazisusa!
Cima ii-imeyile zokuTshintsha kunye neeMpazamo ngeMpazamo:
Ukuba ucima i-imeyile okanye enye into kwibhokisi yeposi ye-Exchange, ngokunqakraza iqhosha elithi "Del", emva koko iya kusiwa kwifolda "Izinto ezisusiweyo". Ungayibuyisela ngokutshintsha nje kwifolda "Izinto ezisusiweyo", ufumane i-imeyile okanye into oyifunayo, kwaye uyibuyisele kwindawo yayo yasekuqaleni okanye kwezinye iifolda eziqhelekileyo.
Nangona kunjalo, ukuba ucima into yoTshintshiselwano njengoko kuchaziwe kwezi meko zintathu zilandelayo, iyakucinywa umphelo:
Wena okanye umlawuli usebenzisa umsebenzi onzima wokucima (iShift + Del) ukucima into yoTshintshiselwano. Umsebenzi onzima wokucima uvumela utshintshiselwano ucime into ngaphandle kokuyithumela kwifolda "yezinto ezisusiweyo" okanye kwiCache yezinto ezisusiweyo xa ipropathi yeCache yezinto eziSusiweyo ingasebenzi.
Wena okanye umlawuli cima into leyo kwifolda "yezinto ezisusiweyo".
Umlawuli ngokungacwangciswanga ucima ibhokisi yeposi okanye kwiseva yoTshintshiselwano xa usebenzisa inkqubo yeMicrosoft Exchange Administrator. Kwimeko enjalo, uTshintsho lususa umphelo kwibhokisi yeposi okanye kwiseva kulawulo.
Nokuba into icinyiwe ngokusisigxina, usenokwazi ukuyifumana kwakhona ifolda engaxhunyiwe kwi-intanethi (.ost) ifayile ehambelana nebhokisi yeposi yoTshintshiselwano, njenge OST ifayile ikopi ngaphandle kweintanethi yemixholo yebhokisi yeposi kwiseva. Kwaye zimbini iimeko:
Awuyivumelanisi i OST ifayile kunye neseva. Kwimeko apho, into ecinyiweyo kwiserver isekhona kwifayile ye- OST fayile ngokwesiqhelo.
Ungqamanisa ifayile ye OST ifayile kunye neseva. Kwimeko apho, into ecinyiweyo kwiserver nayo iya kususwa kwifayile ye- OST ifayile.
Ngayo nayiphi na imeko, ungasebenzisa DataNumen Exchange Recovery ukubuyisa into ecinyiweyo kwifayile ye- OST ifayile. Kodwa kwiimeko ezahlukeneyo, unokulindela ukufumana into engachazwanga evela kwiindawo ezahlukeneyo.
usebenzisa DataNumen Exchange Recovery Ukubuyisa iZinto zoTshintsho eziSuswe ngokusisigxina:
Nceda wenze ngolu hlobo lulandelayo ukuze uphinde ufumane izinto zoTshintshiselwano ezisuswe ngokusisigxina DataNumen Exchange Recovery:
Kwikhompyuter yakho yendawo, fumana iifayile ze OST ifayile ehambelana nebhokisi yeposi yokutshintsha apho ufuna ukungasusi izinto. Unokumisela indawo ekuyo ifayile ngokusekwe kwipropathi yayo eboniswe kwi-Outlook. Okanye sebenzisa i ukufuna ukusebenza kwiWindows ukuyikhangela. Okanye khangela kwiindawo ezichazwe ngaphambili.
Vala i-Outlook kunye nolunye usetyenziso olunokufikelela kwifayile ye- OST ifayile.
Khetha OST ifayile ifunyenwe kwinyathelo lokuqala njengomthombo OST ifayile ukuba ibuyiswe.
Cofa ku “Start Ukubuyisa kwakhona ”iqhosha lokufumana kwakhona imithombo OST ifayile. DataNumen Exchange Recovery iya kuskena kwaye ibuyise izinto ezisusiweyo kumthombo OST ifayile, kwaye ugcine kwifayile entsha ye-PST ye-PST enegama elichazwe kwinyathelo lesi-5.
Emva kwenkqubo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo, unokusebenzisa iMicrosoft Outlook ukuvula imveliso yePST yefayile kwaye ufumane izinto ezingasuswanga. Ukuba awuyivumelanisi i OST ifayile kunye neseva, emva koko unokufumana izinto ezingasetyenziswanga kwiindawo zabo zangaphambili. Nangona kunjalo, ukuba sele ulungelelanisile OST ifayile, emva koko unokufumana izinto ezingasetyenziswanga kwiindawo apho zisuswe khona ngokusisigxina. Umzekelo, ukuba usebenzisa iqhosha elithi "Shift + Del" ukucima i-imeyile ngokusisigxina kwifolda ethi "Inbox", emva koko DataNumen Exchange Recovery izakubuyisela kwakhona kwifolda "Inbox" emva kwenkqubo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo. Ukuba usebenzisa iqhosha elithi "Del" ukucima le meyile kwifolda "Inbox", emva koko uyicime ngokusisigxina kwifolda "Izinto ezisusiweyo", emva kokubuyisa kwakhona, iya kubuyiselwa kwifolda "yezinto ezisusiweyo".
Phawula: Unokufumana izinto eziphindiweyo ezingasetyenziswanga kwiifolda "eziFunyenweyo_Groupxxx". Nceda ungabahoyi. Kuba ngamanye amaxesha xa ususa into kwibhokisi yemeyile yakho yokuTshintshisa kwaye uyangqamanisa nayo OST ifayile, i-Outlook iya kwenza iikopi eziphindiweyo ngokungangqinelaniyo. DataNumen Exchange Recovery inamandla kangangokuba inokufumana kwakhona zonke ezi kopi zibhalwe kwaye ibaphathe njenge-lost & Izinto ezifunyenweyo, ezifunyenweyo zaza zafakwa kwiifolda ezibizwa ngokuba yi “Recovered_Groupxxx” kwifayile yePST echanekileyo.